Galmudug oo ku dhawaaqday Xaalad Deg-deg ah | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo ku dhawaaqday Xaalad Deg-deg ah
Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Galmudug ayaa Ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo uu horseeday Anyax ku habsaday Deegaanada Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Sida lagu baahiyay waraaq kasoo baxday xafiiska Wasaaradda Gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug waxaa deegaanada maamulkaasi la galiyay xaalad deg-deg ah oo uu sababay Anyax ku habsaday dhirtii iyo daaqa dhammaan deegaanada Galmudug.
Wasaaradda Gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa baaq u dirtay hay'adaha iyo cid kasta ee ka gacan siin karta halista uu ku hayo deegaanada Galmudug oo aan helin sanadkan roob badan. Intii yareed ee ka da'day deegaanada qaar ayuu Anyihii ku hayaa xaalufin.
Maalin ka hor ayey hayd markii wasaaradda Beeraha ee dowlad goboleedka Galmudug ay ka billowday buufinta Anyaxa caasimadda Dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb, inkastoo tirada Anyaxa iyo agabka la heli karo aysan isku mid ahayn haddana waxaa lala tacaalayaa ilaa xad in la cirib tiro Anyaxa ku habsaday deegaanada Galmudug.